Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ihe nkpuchi nkpuchi na -alaghachi na London Underground
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụrụ na etinyere ya, mgbanwe ndị Mayor Khan tụrụ aro ga-eweghachi ọnọdụ ahụ n'ụzọ ụgbọ njem ọha na London na ọnọdụ tupu July 19.
Iwu nwere ike ịchọ mkpuchi nkpuchi na Tube n'oge adịghị anya.
Naanị nkpuchi nkpuchi ga -eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala na njem ọha.
Amachibidoro iji nkpuchi mkpuchi maka England kwụsịrị na July 19.
Onye isi obodo London Sadiq Khan na -agba ume nloghachi nke nkpuchi mkpa Tube London, na-achọ ime ya ka ọ bụrụ iwu iwu, si otú a na-enyere ndị uwe ojii ụgbọ njem Britain aka ịmanye ya ma nye ndị na-abanye n'ụgbọ oloko ntaramahụhụ a kapịrị ọnụ.
Onye isi obodo London Sadiq Khan
Khan kwuru, "Anyị na-anwa imechi gọọmentị ka o nye anyị ohere ibubata iwu iwu, yabụ na ọ ga-abụ iwu ọzọ, yabụ anyị nwere ike nye ọkwa ntaramahụhụ a kapịrị ọnụ ma anyị nwere ike iji ọrụ ndị uwe ojii na BTP mezuo nke a." , na -agbakwụnye na naanị ikpuchi nkpuchi ga -eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala na njem ọha.
Ime mmanye iji ihe nkpuchi ọzọ ga-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala ma gbaa ha ume ka ha jiri Tube, onye isi obodo kwuru.
Amachibidoro ikpuchi nkpuchi maka England na July 19, n'agbanyeghị na Khan na-emegide mmegharị a mgbe niile. Tupu 'Ụbọchị Nnwere Onwe', nke kwụsịrị ịcha nkpuchi, ọ rịọrọ Transport maka London (TfL) ka ọ mee ka ọ bụrụ "ọnọdụ ụgbọ ala," na-eme ka ndị ọrụ TfL nwee ike ịrịọ ndị njem na-akwadoghị ka ha hapụ ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko.
Ọ bụrụ na etinyere ya, mgbanwe ndị Mayor Khan tụrụ aro ga-eweghachi ọnọdụ ahụ n'ụzọ ụgbọ njem ọha na London na ọnọdụ tupu July 19. N'agbanyeghị mmachibido mmachi, ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị okenye nọ na UK ka na-eme atụmatụ ịnọgide na-eyi mkpuchi, dị ka ọnụ ọgụgụ gọọmentị siri kwuo. Ọnụ ọgụgụ ndị yi mkpuchi ihu n'ụgbọ njem ọha ka dịkwa elu, ebe ihe dịka 85% nke ndị njem ụgbọ ala, ụgbọ ala, na ụgbọ oloko na -aga n'ihu na -eme ya.